A na-ahụ Oppo A92s nke ọma na nhọrọ agba dị iche iche | Gam akporosis
A na-ahụ Oppo A92s n'ụzọ zuru oke na nhọrọ agba dị iche iche
Ọzọ Oppo mobile ga-eji a Ngosipụta 120Hz nke ahụ ga-enwe oghere ụlọ ihe mmetụta igwefoto selfie, nke ga-abụ abụọ, nke ga-ebute oghere n'ụdị pill. Nke a ga - ada n’ahịa n’oge na - adịghị anya, ọ ga - emekwa ya n’aha Opo A92s.
El ọnụahịa na agba nhọrọ n'ime nke a ka ekpughere n'oge na-adịbeghị anya. Ugbu a, iji gosipụta akụkụ nke ihe anyị mara ma kpughee n'oge gara aga banyere ya, anyị nwere ihe nkwalite ọhụụ nke kwụgidere ụdị ekwentị anọ na-egosi atụmatụ ya n'ụzọ zuru ezu.
E gosipụtara ọdịdị nke Oppo A92s smartphone na nsụgharị ọhụrụ ya, yana igwefoto quad ya na-adọrọ adọrọ nke na-adọta uche nke ihe karịrị otu.
Ekwentị ga-abịa na 6 GB, 8 GB ma ọ bụ 12 GB nke RAM, ma nwee nhọrọ nchekwa abụọ: 128 GB na 256 GB. Agbanyeghị, naanị nke nwere ọnụahịa gọọmentị bụ nke 8 + 128 GB, nke bụ yuan 2,499, ọnụ ọgụgụ nke ya na ihe dị ka euro 325 ma ọ bụ 355 na ọnụego mgbanwe gọọmentị.
Dị ka anyị kọrọ n'oge gara aga, na mgbakwunye na inwe ihuenyo 120 Hz na-enye ume ọhụrụ, nke bụ otu ihe ahụ na-ekwu na ọ na-amịpụta okpokolo agba 120 kwa nkeji (fps), a ga-ebido ekwentị ahụ na nhazi ya Dimensity 800 nke Mediatek dere, ya mere akwadoro nkwado maka 5G network. Amakwara na ihuenyo ga-abụ IPS LCD teknụzụ ma nwee diagonal nke 6.57 sentimita asatọ.
N'aka nke ọzọ, Oppo A92s ga-abịa na igwefoto quad nke ga-enwe ihe mmetụta sensọ ndị a: 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP. Onye na-agba ụja abụọ anyị ga-ahụ n'ihu ga-abụ 16 MP + 2 MP. Na ngụkọta, a ga-enwe ihe igwefoto igwefoto isii anyị ga-enweta site na ama a na-ajụ arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-ahụ Oppo A92s n'ụzọ zuru oke na nhọrọ agba dị iche iche
Gameloft na-agba afọ iri abụọ ya: gbalịa egwuregwu 20 n'efu na Gameloft Classics